Izizathu Ezi-6 Zokuthenga i-B2B noma i-B2C Prospect List | Martech Zone
Izizathu Ezi-6 Zokuthenga i-B2B noma i-B2C Prospect List
ULwesithathu, May 21, 2014 ULwesihlanu, July 8, 2016 Douglas Karr
Uyakuzwa ukukhala? Hewu.. UJenn Lisak Wenze lapho ebeka kuTwitter izindawo zokuba thenga uhlu lwamabhizinisi olunembile. Ukukhala kokungenami kwakusheshe futhi inkampani yethu yaze yabizwa ngokuthi ayilungile ngumuntu oyedwa. Ama-tweets ayenhlekisa kangangokuthi uJenn wasusa i-Tweet futhi wayeka ingxoxo.
Lapho uJenn engitshela ukusabela, ngacasuka ngempela. Okokuqala, indida yothile osepulatifomu emaketha futhi ithengisa idatha yayo ngokusobala kuyahlekisa. Okwesibili, impendulo esheshayo uJenn ayithola ibingaqondakali. Yize umusa kaJenn, ukuthobeka nobungcweti… abantu ababemlandela ngokushesha bacabanga ukuthi izinhlu zizosetshenziselwa okubi.
Ukucatshangelwa ukuthi lolu hlu lwaluzoba yi-SPAM ukukhishwa kwabantu. Yebo… umakethi ongumakadebona ne-ejensi egxile ekuxhumaneni nge-imeyili, abalingani ku i-imeyili yokumaketha yesikhulumi, futhi inobambiswano olusemqoka ne ipulatifomu yokulethwa… Ngandlela thile ucabange ukuthi kuwumqondo omuhle ukuqala amabhizinisi ogaxekile.
Ngenkathi ngisebenza embonini yeposi eqondile, sathenga uhlu olungapheli. UHeck, elinye lamaqhinga amahle okwenziwa ngumkhankaso kaMongameli u-Obama ukuthenga izigidi zamarekhodi wolwazi lomuntu siqu ukwenza izinhlelo zokufinyelela emphakathini lapho kunengqondo khona ... kwamholela ekutheni ashaye uHillary Clinton (owayengumnikazi wedatha yeDemocratic) futhi ahole phambili ukhetho.
Ukuthenga idatha kufanele kube utshalomali kuwo wonke amabhizinisi! Ku-SPAM? Ngokuphambene nalokho!
Ukusebenzisa idatha yebhizinisi kwenza abakhangisi benze ithoni yemikhankaso ebhekiswe kakhulu ebasiza ukuthi bagweme i-SPAM ngokuphelele!
Ukufaka Idatha ezinhlwini zamakhasimende akhona kungakusiza ukukunikeza imininingwane yebhizinisi esesikhathini, idatha yokuhlukaniswa, imininingwane yokuxhumana, nolunye ulwazi olusemqoka. Lolo lwazi lungakusiza ukuthi wakhe imikhankaso ebhekiswe kakhulu ngokunemba okukhomba.
Ukuhlanza Idatha ingakugcina ohlwini olumnyama, ikhulise ukubekwa kwakho ebhokisini lokungenayo, ikusize ugweme izihlungi ze-junk, futhi ithuthukise ukuhanjiswa okuphelele. Idatha iyaguga - ikakhulukazi amakheli e-imeyili ebhizinisi lapho kunenzuzo ephezulu. Ukuthenga uhlu olusha noma kuhlanzwa uhlu lwakho lwamanje ingashayela ukuthuthuka okukhulu ngamanani avulekile, wokuchofoza, nokuguqulwa kumakethi wakho we-imeyili.
Ukuthola Oxhumana Nabo lokho kuqhubekile kungasiza ukwandisa ibhizinisi lakho. Uma ngisebenze noxhumana naye enkampanini eyodwa futhi saphumelela, ukuthola ukuthi uthuthele kuphi futhi wethula kabusha imikhiqizo nezinsizakalo zakho kungasiza ukubabuyisa! Ngenkathi ukugcinwa kuyinqubomgomo enhle kakhulu, amakhasimende amaketha kabusha aqhubekile asebenza kahle!
Ukuhlaziywa kwephrofayela - Ukuhlolwa kwamakhasimende nokuqoqwa kwedatha kuhle, kepha ukwengezwa kwedatha kungakunika lonke ulwazi oludingwa yibhizinisi lakho ukusiza ukuqonda labo bantu noma amabhizinisi osuvele wenza nalo ibhizinisi. Izibalo zabantu kanye ne-firmographics kungakusiza uqonde izimboni kanye nejografi ofinyelela kuyo (noma cha), kukusize ukuthi wakhe amasu wokuqukethwe okubhekiswe kuwo, futhi kukusize unqume izindlela ezifanele zokukhangisa ukuze uthole umlayezo ofanele kumuntu ofanele.
Ibhizinisi Elisha - uyakuqonda ukungena kwakho emakethe? Ingabe akhona amabhizinisi amasha laphaya noma amathemba amasha laphaya okufanele ngabe umaketha kuwo? Uhlu lwamabhizinisi amasha luyimayini yegolide ezimbonini eziningi! Hhayi nge-SPAMMING, kepha ngokuthola nokwakha ubudlelwane nabo. Uma uyi-ejensi enikezela ngezinsizakalo zokumaketha nokuklama, ngubani ongcono ukumaketha kunohlu lwamabhizinisi asanda kufaka isicelo futhi athola amalayisense awo ebhizinisi. Ungayithola kanjani enye ngaphandle kokuthola idatha?
Uhlu Lokulindelwe - ingabe uyibhizinisi elisanda kuthola inqwaba yezimali zokutshala imali? Sekuyisikhathi sokuba uqale ukuthola amathemba futhi uwathengisele. Ngeke ulinde imizamo yokumaketha engenayo yemvume yokubamba futhi abantu bangqongqoze emnyango wakho… uzolahlekelwa ngabatshalizimali nethuba lakho. Uhlu lweProspect lungasiza ithimba lakho lokuthengisa ukuthi libhekise kangcono izingcingo abazenzayo kanye neposi umnyango wakho wokumaketha ongathinta ngalo. Ayikho indlela yokufeza lokhu ngaphandle kokuthengwa kwedatha.
Ingabe uthenge idatha eqondisiwe yebhizinisi lakho? Ngisebenzele ithani lamabhizinisi, ngasebenza ku-database nokumaketha okuqondile, futhi manje ngiku-inthanethi. Sibona ngokuphelele ukuthi imizamo yokumaketha esekwe kwimvume iqhuba imiphumela emihle yebhizinisi emabhizinisini. Kepha asilazi iqiniso lokuthi idatha ethengiwe ingasiza futhi ekuhloleni, ekuhlaziyeni, ekuthuthukiseni nasekuqondiseni imizamo yokuthengisa engcono nokumaketha. Kukhona ukubuya okuhle kudatha ethengiwe!
Inikwe amandla ngumxhasi wethu, Ungaze unqande.
Tags: thenga idathaThenga uhluukwengeza idathaukuhlanzwa kwedathauhlu lwe-imeyilii-firmographicsibhizinisi elishaukuhlaziywa kwephrofayiliuhlu lwethemba
Douglas Karr Wednesday, May 21, 2014 Friday, July 8, 2016
Iselula Okokuqala lapho Ixhuma Kumakhasimende
Izikhangiso ze-Real-Time Mobile nguZapp360
Feb 13, 2015 ngo-12: 07 PM
I-athikili enkulu uDouglas, bengikade ngifuna imininingwane ephathelene nohlu lwe-B2B noma iB2C olulindelwe isikhathi eside manje, lokhu kusizile ukubonga okukhulu, ngizokwaba lokhu nethimba lami.
May 16, 2016 ku-3: 45 PM
Thanda lokhu okuthunyelwe uDouglas!
Ukuthengwa kohlu lwe-imeyili kuthola i-rap embi kangako kepha kungaba yindlela enhle yokufinyelela izithameli zakho eziqondiwe ngenkathi imizamo yokumaketha engenayo ithola ukudonsa. Mina uqobo ngisebenzela inkampani ebizwa nge-Clickback esebenza ngqo nezinkampani ze-B2B nemizamo yabo yokumaketha ephumayo.
Impela i-athikili engizokwabelana ngayo!
May 16, 2016 ku-10: 05 PM